Ideas Guide Channels | ONOW Myanmar
Financial Capabilities Whitepaper
Tools for Continuing Support
ဒီနေရာကို “လုပ်ငန်းအောင်မြင်ရေးအကြံပေး” စာအုပ်ကတဆင့် အိုနောင်းရဲ့လမ်းညွှန်ကူညီမှုများကို ရယူဖို့ ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအောက်မှာတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာအသိပညာများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကဏ္ဍကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပြီး အခြားသူတွေကိုလည်း ဒီအကြောင်းအရာတွေကို ဝေမျှပေးနိုင်ပါတယ်။
You're here because you used the "Ideas Guide" to reach ONOW's collection of support tools! Below, you can find link to options for business, money and financial support. Feel free to explore and tell others about these interactive tools!
"စွန့်ဦး" ဆိုတာကတော့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးလမ်းညွှန်မှုတွေကို အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် လေ့လာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး ဖေ့ဘုတ် (သို့မဟုတ်)ဖေ့ဘုတ်မက်ဆင်ဂျာ (သို့) အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းတစ်နေရာရာကနေ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ လုပ်ငန်းစတင်နည်းသင်တန်း၊ လုပ်ငန်းအတွက်အချက်အလက်ရှာဖွေမွမ်းမံခြင်း ၊ ငွေကြေးစီမံချက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲခြင်းနဲ့ လုပ်ငန်းအတွက်ပံ့ပိုးလမ်းညွှန်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
စတင်လေ့လာနိုင်ဖို့ ဒီအောက်က "Send Message” ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
"Sont Oo" is ONOW's solution to business support, available through Facebook and Facebook Messenger! You can take the STARTUP program, research your business, create your financial plan, and connect with an individual coach.
Just click "Send Message" below and get started in your own business!
“ငွေဥယျာဉ်” မှာတော့ ဖုန်းတစ်လုံးထဲကနေ ငွေကြေးကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ပျော်ရွင်စရာအမေးအဖြေလေးတွေနဲ့လေ့လာရမှာပါ။ ချေးငွေအကြောင်း၊ မိုဘိုင်းငွေကြေးအကြောင်းနဲ့ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးလုံခြုံရေးအကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းပိုနားလည်ပြီး ချိတ်ဆက်နိုင်သလို ငွေကြေးကိုလံခြုံစိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက် စတင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
"Ngwe Oo Yin" isafun way to learn about how to use your phone to manage your finances! Learn about loans, mobile money, and digital security! You can also connect directly to financial institutions and initiate your account set up to begin using your money safely today!
Available in Facebook Messenger! Click "Send Message" below to start!
ONOW exists to enable female migrants to become financially capable and empowered entrepreneurs.
09 261 003 798
No. 945, Building A, Muditar Housing
2703 Lakewood Dr N
Carmel, IN 46280 USA
© ONOW 2022